Inona no dikan'ny CM ao amin'ny CM Punk? - Wwe
Inona no dikan'ny CM ao amin'ny CM Punk?
CM Punk dia iray amin'ireo mpanakanto be vava indrindra amin'ny fotoana rehetra. Niala tamin'ny WWE tamin'ny taona 2014 izy tamin'ny fe-potoam-piasany manokana, ary voalaza fa mety hiseho amin'ny All Elite Wrestling izy afaka herinandro vitsivitsy. Ity dia hanamarika ny fisehoana an-tsarimihetsika voalohany nataon'i CM Punk nandritra ny fito taona mahery.
CM Punk dia voarohirohy tamina raharaha fitsarana niaraka tamin'ny dokotera WWE Dr. Chris Amman taorian'ny nialany WWE tamin'ny taona 2018. Ny raharaham-pitsarana dia nanambara zava-misy mahafinaritra. Nanambara ny valin'ny fanontaniana iray izay efa nanontanian'ny maro nandritra ny taona maro. Nambara fa ny 'Chick Magnet' no 'CM' amin'ny anaran'i Punk. Punk dia nanamafy izany tamin'ny fijoroana ho vavolombelona.
CM Punk izay nanao fianianana androany dia nanamafy fa ny CM amin'ny anarany dia mijoro ho an'ny Chick Magnet.
(Feo tsara kokoa i Chicago Made)
- TWC - #BigDaddyCiampa (@TheWrestlingCov) 2 Jona 2018
Betsaka no nanombantombana ny hoe 'CM' nijoro ary ankehitriny manana ny valiny izahay. Alao an-tsaina ange hoe any amin'ny efi-pitsarana izy rehefa mamaky ny anarany? Azoko antoka fa nahazo gigika vitsivitsy sy fijery hafahafa vitsivitsy izy io.
Tena noheverina ho anaran'i CM Punk ve ny 'Cookie Monster'?
Izy izay dia. Tamin'ny taona 2006 dia nipetraka niaraka tamin'ny IGN i CM Punk ary lohahevitra niadian-kevitra ny resaka anarany. Punk no voalaza mametaka anarana isan-karazany eo am-piezahana hitarika ny mpankafy.
Lazaiko amin'ny olona fa midika ho an'i C. Montgomery Burns, toa an'i Andriamatoa Burns avy The Simpsons . Lazaiko amin'ny olona fa voaloham-bokatra ho an'ny tena anarako Chuck Mosley izay tsy marina velively. Holazaiko fa mijoro ho an'ny Crooked Moonsault, Charles Manson. Cookie Monster dia iray hafa tsara. ' CM Punk nilaza (h / t Sports Illustrated)
Ka ny CM ao amin'ny CM Punk dia mijoro ho an'ny Chick Magnet
Haha tiako izany. #cmpunk #wwe # fanahy #allin pic.twitter.com/s1rXWg0lWd
- The 434 (@ TheFourThree4) 2 Jona 2018
Taloha dia nilaza i Punk fa ny 'Chick Magnet' dia mety ho ilay nijoroan'i 'CM' mitovy Resadresaka IGN :
Tamin'ny voalohany dia mijoro ho an'ny Chick Magnet. dia napetraka tao amin'ny ekipa tag miaraka amin'ity sakaiza iray hafa ity satria tsy nisy olona tonga tamin'ny fampisehoana. Tokony ho fifanarahana iray ihany no natao, tsy mbola vonona ny hanao tolona akory aho, tsy nanana fitaovana na zavatra hafa, napetrany fotsiny tao anaty peratra aho ary nokapohin'izy ireo ilay banga. Tsy maintsy niverina aho tamin'ny volana manaraka sy ny volana manaraka ary zavatra nikatona izany. Niezaka ny nanala azy aho, ary nanjary nihafohy ho toy ny inisialy. Punk foana aho, fa ny Chick Magnet farafaharatsiny nohafohezina ho CM. ' CM Punk hoy. (h / t Fanatanjahantena an-tsary)
Hatramin'ny taona 2018 dia nanana fanamafisana tanteraka izahay, tamin'ny fianianana, fa Chick Magnet Punk no tena anarany anarany, ary azontsika atao ihany ny mametraka ny vinavinany.
maninona no mijery ahy foana izy
ny fomba aoka handeha ny lasa
olona mihevitra fa manana ny zony
maninona aho no tsy tia olona